Maxkamada ciidamada DKMG oo xukun dil ah ku fulisay askar ka mid ahaa…Video+Sawiro – SBC
Maxkamada ciidamada DKMG oo xukun dil ah ku fulisay askar ka mid ahaa…Video+Sawiro
(Digniin fadlan caruurta yar yar, haweenka uurka leh, dadka qaba xanuunada sonkorta & dhiigkarka iyo waliba dadka qalbiga jilicsan sawirada & filimka yaanay daawan)
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawlada KMG Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxay ku ridey askar ka tirsan ciidamada dawlada oo lagu sheegay in ay dilal u geysteen, waxaana dilkooda uu ka dhacay tiirka toogashada ee School Polizio.
Askarta la toogtey ayaa waxaa lagu kala magacaabi jirey C/llaahi Jiinow Guure 29 sano jiir ah oo ahaa dable ka tirsanaa ciidamada qalabka sida oo dilay isla askari kale oo ka mid ahaa ciidamada dawlada, askariga kale ayaa waxaa lagu magacaabi jirey Cabdi Sankuus Cabdi oo 31 sano jir ah kaasi oo dil u geystey nin rayid ah sida ay cadeysay maxkamada ciidamada qalabka sida.
Labadan askari ayaa waxaa xukunkooda saxaafada uga warbixiyey Guddoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawlada KMG Soomaaliya G/sare Xasan Maxmed Xuseen (Muungaab) oo sheegay in dilkaasi uu ahaa mid ka turjumaya go’aamada dawlada ah ee in cidii dil si sharci daro ah u gaysta ee ka mid ah ciidamada qalabka sida in tiirka la geyn doono oo la tooganayo.
Dilkan oo dhacay saaka ayaa waxaa goob ka ahaa masuuliyiin ka tirsan dawlada dawlada KMG, maamulka gobolka Banaadir & maxkamada ciidamada qalabka sida, waxaana sidoo kale loo ogolaadey dilkaasi toogashada ah inay daawadaan dadweynaha xaafada Xamar Jajab.
Labada askari ee la toogtey ayaa waxaa laga xiray indhaha, ka dibna waxaa lugaha, gacmaha & dhabarka looga xiray tiirar dhaadheer oo dhulka ku duugan waxaana dilka toogashada fuliyey askari laba saf oo istaag & fadhi xabadaha ugu ridey labada askari ee la toogtey, waxaana mid kasta ugu dambeyntii xabado israacis ah af galis ugu toogtey askari ka mid ah ciidamada.
Labada marxuum ayaa isla markii naftu ka baxdey waxaa laga furey tiirkii iyadoo mid kasta lagu aasay qabri ku dhexyaal isla School Polizio.
Link Video hoose ka daawo muuqaalka toogashada (Digniin sawiro naxdin leh)